अबहाम्रो स्तन हाम्रो रहेन, पवित्रता, पाप वा लाजका कारण । मेरो स्तनका लागि सधैं आमाको अनुमति जरुरी भयो । कहिल्यै मैले मेरा स्तन मेरा अनुसार राख्न पाइनँ । मेरा बा र छिमेकीको उपस्थितिमा मैले ब्रा पहिरनै पर्ने भयो । उनीहरुका अघि म कहिल्यै भित्र ब्रा नलाएर बाहिर अर्कै लुगाका साथ पनि उपस्थित हुन सकिनँ । मेरा स्तनलाई सार्वजनिक सवारीमा पुरुषबाट सुरक्षाको जरुरी भयो, जसले मलाई अपनमान गर्न चाहन्छ । मेरा सबै प्रेमी, जो मेरा स्तनको तारिफका गरेर कहिल्यै थाकेनन् । उनीहरु मेरा स्तनप्रति दिवाना थिए । म कल्पना गर्थें कि मेरा सन्तान कस्ता होलान्, जब मेरा सन्तान हुन्छन् उनीहरु मेरो छातिसँग जोडिएका स्तनको दूध पिउँछन् ।
किन हरेकले शरीरको यो भागमाथि दावी गर्न चाहन्छ ? मैले यो कुरा बुझिरहेकी छैन, एक महिला अर्की महिलालाई किन भन्छे, ‘तिम्रा स्तन साह्रै सुन्दर छन् ।’ वा उत्साहका साथ कराउँछे– वाह, हेर त कति राम्रा स्तन !’ ठीक यसैगरी सिलिकन इम्प्लान्ट हामी सिर्फ पोर्न स्टार वा हिरोइनका कामका सम्झिन्छौं । किन फ्ल्याट छाती भएकी महिलालाई ‘म्यानचेष्टर’ भनिन्छ ? नग्नता संस्कृतिकै नयाँ लाजलाग्दो अवधारणा हो । पहिले यसलाई कला र उत्साहका रुपमा लिइन्थ्यो ।